Pet Pal ~ iPhone App Let You Control Your Pets | My Burmese Blog
Pet Pal ~ iPhone App Let You Control Your Pets	On April 1, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- App, iPhone	Gameloft ဆို​ု​တာ Asphalt Racing, N.O.V.A, Hero Of Sparta လို​ဂိမ်း​တွေ​နဲ့ iPhone, iPad မှာ နာမည်ကြီး​တဲ့ ဂိမ်း publisher ပါ။ Gameloft က​နေ​ပြီး​တော့ လက်​ရှိ သိပ္ပံ ပညာ​ရှင်​တွေ​နဲ့ ပေါင်း​ပြီး လေ့​လာ​ထား​စမ်းသပ်​ထား​တဲ့ video တစ်​ခု​ကို youtube မှာ ကြည့်​ရ​ပါ​တယ်။ Pet Pal လို့ခေါ်​တဲ့ iPhone app ဖြစ်​ပြီး အဲ​ဒီ app နဲ့ မိမိ အိမ်​မှာ​မွေး​ထား​တဲ့ တိ​ရိ​စာ​္​ဆန်​တွေ​ကို ခိုင်း​စေ​လို့​ရ​နိင်​အောင် လုပ်​ထား​ပေး​တာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဖုန်းကနေ ထုတ်​မယ့် frequency မြင့်​တဲ့ အသံ​လိှ​ုင်း​တွေ အသုံးပြု​ပြီး တိ​ရိစ္ဆာန်​တွေ​ရဲ့ ဦး​နှောက်​ကို ခိုင်း​စေ​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ခွေး​တွေ ကြောင်​တွေ အတွက် အဓိက​လုပ်​ထား​တယ်​လို့ ပြော​ပါ​တယ်။ နောက် accessory အနေ​နဲ့ လည်ပတ် ကင်​မ​ရာ​လဲ ထုတ်ထား​ပေး​ပြီး မြင်​ကွင်း​တွေ​ကို ကြိုး​မဲ့​နည်း​ပညာ​နဲ့ ဖုန်းပေါ်​မှာ ပြ​ပေး​မှာ​ပါ။ လက်​ရှိ​တော့ အဲ​ဒီ app က ထွက်​မ​လာ​သေး​ပါ​ဘူး။ ကွ​ျန်တော်​တော့ သဘောကျ​လို့ ထွက်​ရင် Tom Tom ထက်စျေးကြီးရင်ကြီးပါစေ စျေး​ဘယ်လောက်​ဖြစ်​ဖြစ် ဝယ်​ဖြစ်​အောင် ဝယ်​လိုက်​ပါ​ဦး​မယ်။ App, iPhone	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+ 8 Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts